Milaza ny Ogandey hoe #NoToSocialMediaTax fa manambaka ny vehivavy, ny tanora ary ny mahantra io · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Jolay 2018 10:33 GMT
Vakio amin'ny teny English, Français, Español, 繁體中文, Swahili, Italiano, English
Ogandey mijoro manohitra ny hetra vaovao atao amin'ny media sosialy sy ny Mobile Money (Vola am-pinday).
Nanomboka tamin'ny voalohany jolay 2018 ny governemanta Ogandey nampandoa sara 200 shilling ogandey (0,05 dôlara amerikana) amin'ny fampiasana media sosialy, ka niteraka fanamelohana henjana avy amin'ny Ogandey. Raha 604 dolara isan'olona ny harinkarena faobe, dia mety hihinana hatramin'ny telo isanjaton'ny vola miditra isan-taona amin'ny Ogandey amin'ny ankapobeny ny fampiasana media sosialy na fampiasa fampitan-kafatra.
Nivadika ho fitoriana eny amin'ny fitsarana ny fanoherana ny fampandoavan-ketra ny media sosialy tamin'ny roa jolay rehefa nandeha teny amin'ny fitsarana ny olompirenena tamin'ny fampandresen-dahatra fa mifanohitra amin'ny lalampanorenana ogandey ilay hetra. Mandresy lahatra ny mpitory fa itsakitsahan'ity hetra ity ny zon'olombelon'ny Ogandey izay omen-danja ao amin'ny “fepetra manokan'ny Lalampanorenan'ny Repoblikan'i Ogandà tamin'ny taona 1995″.
Mitantara ny gazety kenyana The Daily Nation:
Ny fitoriana, napetraky ny ekipan-tanora mpisolovava amin'ny anaran'ny orinasa Cyber Law Initiative (U) sy olon-tsotra efatra, Atoa isany Opio Bill Daniel, Baguma Moses, Okiror Emmanuel ary Silver Kayondo, ho fanoherana ny lehiben'ny fampanoavana, dia manohitra ny maha-ara-dalàmpanorenana ny fampandoavana sara 200 shillings ogandey isan'andro mba hidirana amin'ny sehatra media sosialy.
Kinendrin'ity fitoriana ity ny toko maromaro ao amin'ny Excise Duty Amendment Act 2018 [Fanitsiana taona 2018 ny hetra tsy mivantana] mifandraika amin'ny hetra atao amin'ny tolotra Over The Top (mihoatra ny tampony) (OTT) amin'ny fampiasana telefonina finday.
Rahonan'ny hetra ny zo fototra halalaka hiteny sy ho afa-miditra amin'ny vaovao torohay izay tsy ny Lalampanorenana Ogandey ihany no miantoka izany fa arovan'ny fifanarahana iraisampirenena ahitana ny Dina Iraisampirenena amin'ny zo ara-tsivily sy politika sy ny Fanambaràna Manerantanin'ny Zon'Olombelona — nanasoania ireo lahatahiry roa ireo i Ogandà.
Niangavian'ny mpitory ihany koa ny fitsarana hamoaka didy izay hampitsahatra tanteraka ny hetran'ny media sosialy. Mitatitra ny gazetiboky PCTech :
Tian-dry zareo ny fitsarana hamoaka didy manakana amin'ny fomba maharitra ny governemanta sy ireo sampandraharaha miankina aminy ary ny mpiasam-panjakana tsy hampandoa hetra na inona na inona amin'ny fampiasana media sosialy na aterineto. Ankoatra izay, tadiavin-dry zareo ihany koa ny didy, amin'ny governemanta sy ny fahefam-panjakana misahana ny sehatry ny serasera, ny Vaomiera Ogandey misahana ny Fifandraisana (UCC) mba hampanarahan-dalàna ny tolotra OTT amin'ny fomba iantohana ny fidirana maimaimpoana, ny tsy fitongilanan'ny tranonkala ary ny fisokafan'ny aterineto.
Nanolo-tena “hitondra ny ady any amin'ny Fitsarana Afrikana misahana ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka” ny mpisolovava Ogandey Silver Kayondo :
Nanatevin-daharana ireo mpitory hanohitra ny hetra amin'ny media sosialy i Raymond Mujuni ho fiarovana ny maha-loharanom-baovaon-gazety ny OTT sy ny famoahana nomerika. An-dalana izahay ho eny amin'ny Fitsarana hanoherana ny Lehiben'ny fampanoavana (minisitry ny fitsarana?), ny Vaomiera Ogandey misahana ny Fifandraisana ary ny URA [sampan-draharahan'ny hetra] izay nampiana hahazoan'ireo didy tsirairay avy. Hiady hatrany amin'ny Fitsarana Afrikana misahana ny Zon'Olombelona sy ny Vahoaka izahay
Nijoro ihany koa ny vondrom-piarahamonina Global Voices, izay isoloanay tena, amin'ity raharaha ity ary nanomana tweetathon ho firaisankina amin'ny mpikatroka ao Oganda, izay tontosaina anio alatsinainy 9 jolay.
Afisy fanentanana #NoToSocialMediaTax. (Sary namboarin'i Innocent Amanyire @NinnoJackJr ary nahazoana alalana) [ora malagasy : 14:00 – 17:00]
Raha mitohy ny ady eny amin'ny fitsarana, mbola mitoetra ny fanontaniana momba ny fampitovian-tantana (equity), rariny, ary ny fahazoa-miditra sady mila fanadihadiana bebe kokoa. Araka ny fitsapan-kevitra nataon'ny Fahefam-pirenena misahana ny teknolojia sy ny vaovao torohay, 77 isanjaton'ny Ogandey no tsy mahazaka ny sara kely indrindra idirana aterineto ary ny 22 isanjato amin'ny mponina manontolo ihany no miditra aterineto amin'izao fotoana izao.
Raha tokony hampiasa vola amin'ny fotodrafitrasa ahafana mampivelatra ny fahafahan'ny Ogandey miditra amin'ny fiseraserana tosaka haingana ny governemanta dia ny hetran'ny media sosialy izay mametra ny fahafaha-miditra sy mampitombo ny vola miditra amin'ny kitapom-bolany no nataony.
Hitan'ny mpitsikera ho endrika fampandoavana hetra roa sosona ity hetra ity satria efa andoavan-ketra ny fotoana iantsoana sy ny lahatahiry ampiasaina. Ankehitriny, mpisera maro no milaza fa tsy zakany tsotra izao ny handoa 200 USH fanampiny isan'olona sy isan'andro ahafahana miditra amin'ny sehatra ara-tsosialy amin'ny tranonkala sy ny sehatra fifandraisana fantatra amin'ny anarana hoe servisy over-the-top (OTT).
Mbola itarin'ity hetra ity ny hantsana amin'ny fahazoana miditra aterineto tsy hoan'ny tanora ogandey sy ny mahantra ihany, fa ho an'ny vehivavy ihany koa, ka manampy trotraka amin'ny hantsana nomerika eo amin'ny lahy sy ny vavy.
Exempt the Rich: Tax the Poor. #SocialMediaTaxpic.twitter.com/nUz0SdLNBr
Tsy ampandoavin-ketra ny manankarena, ampandoavin-ketra ny mahantra.
Mahatsiaro ho voateritery ny tanora ogandey mpisava lalana amin'ny media sosialy
Miady amin'ny tahan'ny tsi-fananan'asa ambony indrindra eto Afrika Atsinanana i Ogandà. Tatitra momba ny fanisam-bahoaka ogandey tamin'ny taona 2014 no nanondro fa amin'ny mponina mihoatra ny 18 tapitrisa anelanelan'ny 14 ka hatramin'ny 64 taona, tsy an'asa ny 58 isanjaton'izany. Ao anatin'izany fotoana izany ihany, 52 isanjaton'ny Ogandey no manana telefonina finday ary ny 71 isanjaton'ireo dia miaina any amin'ny faritra ambanivohitra, hoy ny tatitra nataon'ny Vaomieran'ny Fifandraisana Ogandey tamin'ny taona 2014.
Ny tanora anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 24 taona no mitari-dalana amin'ny fampiasana smartfinday ary mandrafitra ny 28 isanjaton'ny mponina. Maro amin'ireo no miankina amin'ny telefonin-dry zareo sy amin'ny WhatsApp mba hidirana amin'ny fihariana izay miasa amin'ny alalan'ny mobile money (vola am-pinday). Lazain-dry zareo fa tsapany ho manery lalana amin'ny fandraharahana, amin'ny fanamorana ny fihariana, sy ny fahaiza-mamorona ny hetran'ny media sosialy.
Manoritra ny Fiaraha-miasa eo amin'ny politika iraisampirenen'ny TIC ao Afrika Atsinanana sy atsimo fa misanda ny efa ho 40 isanjaton'ny vola miditra isam-bolana amin-dry zareo sahady ny fampiasana lahatahiry iray gigabyte (GB) monja :
Hiakatra 10 isanjato ny saram-piseraserana ho an'ny mahantra indrindra ao Ogandà, ka ny lahatahiry 1 GB fotsiny dia efa mananontanona ny 40 isanjaton'ny vola miditra amin-dry zareo ankapobeny isam-bolana. Ny Ogandey manankarena indrindra indray hahatsapa fiakaram-bidy 1 % amin'ny saran'ny fiseraserana !
Fanivaivana ireo olom-pirenena efa mizaka ny mafy
Manaraka akaiky an'ilay “hetran'ny fifosafosana” nivoaka tamin'ny Avrily 2018 izay efa nampiady hevitra ity hetran'ny media sosialy ity ary hita ho fanivaivana ireo olom-pirenena efa mizaka enta-mavesatra diso tafahoatra. Tamin'izany fotoana izany no nanoratra ny Filoha Museveni hoe:
Tsy hanolotra hetran'ny fampiasana aterineto ho amin'ny tanjona fanabeazana, fikarohana na fitadiavan-dohahevitra aho… tsy maintsy mitoetra ho maimaimpoana ireo. Fa tsy maintsy andoavan-ketra ny lugambo (fosafosa) amin'ny media sosialy (hevitra, fitsarana an-tendrony, fifanompana, resaka finamanana) sy ny dokambarotra sy izay tsy fantatro fa mila vola isika hiatrehana ny vokatry ny lugambo ataon-dry zareo.
Ny fametrahan'ny governemanta ny sehatra media sosialy ho rendrarendra no mampiseho ny tsy fahaizana kolontsaina nomerika avy amin'ireo mpanapa-kevitra ao amin'ny governemantan'i Museveni.
Fintinin'ilay Ogandey mpanao gazety Daniel K. Kalinaki fohy ny fiantraikan'ny “hetram-posafosa” sy ny “hetran'ny media sosialy” amin'ny fiainana andavanandron'ny olompirenena Ogandey :
Roa ny olana amin'ny hetran'ny media sosialy. Voalohany, any amin'ny tsy izy ny olona tifiriny indroa: efa mandoa ny hetran'ny finday, ny hetran'ny lahatahiry ary ny hetran'ny vidinjiro ny mpisera Facebook iray ; vokatra ireo fa tsy fidirambola, raha tsy amin'ny tranga maningana vitsy dia vitsy. Lasa sady mampandoa ny fidirana no mampandoa ny seza ipetrahana any amin'ny kianja foana tsy misy na inona na inona ilay hetra.
Faharoa, tsy amin'ny fosafosa na ompaompa no ampidiran'ny olona vola amin'ny ankapobeny ; manao izany ry zareo satria tsy manao na inona na inona, very fanantenana ary matetika tsy an'asa. Ny fampandoavana hetra azy ireo mba hampangina azy ireo dia mitovy amin'ny fitakiana amin'ny noana tsy manana na inona na inona hotsakotsakoana mba hihinana mofomamy mena sôkôlà ho solon'izany raha ao amin'ny cyber. Henonao ny hiaka hatrany Kidera ka hatrany Kyotera.